Tag: localization | Martech Zone
Chitatu, November 18, 2020 Chitatu, November 18, 2020 Augustin Prot
Kuyambuka muganho ecommerce kuri kuwedzera. Kunyangwe makore mana apfuura, mushumo weNielsen wakaratidza kuti 4% yevatengi vaive vatenga kubva kumutengesi wekunze kwenyika mumwedzi mitanhatu yapfuura. Mumwedzi ichangopfuura iyo COVID-57 yepasirese yakave nesimba rakakura pakutengesa pasi rese. Kutenga zvidhinha nedhaka kwakaderera zvakanyanya muUS nekuUK, nekuderera kwemusika wese wevatengesi muUS gore rino unotarisirwa kuve wakapetwa
Lilt yakavaka yekutanga neural yevanhu + muchina mhinduro loop yekushandura. Lilt's neural machine translation (NMT) system ndiyo yekutanga yerudzi rwayo muindasitiri yehunyanzvi hwekushandura uye inopfuura zvinopihwa kubva kuGoogle, Amazon, Facebook, Apple, kana Microsoft. Mabhizinesi ari kuda kuwedzera kusvika kwavo kwepasirese izvozvi vane sarudzo iri nani yekududzira zvirimo nekukurumidza uye nenzira kwayo. Kana zvasvika pakuturikira, mabhizinesi anga aine sarudzo mbiri chete: Yakazara-mutsara wemuchina shanduro seGoogle Dudziro.
Complete ™: Cross-Border Commerce kubva kuDudziro, Shopping, kuburikidza nekuzadzikiswa
Chipiri, June 13, 2017 Svondo, Zvita 24, 2017 Douglas Karr
Dhizaini dzaTony Bianco dzakatsvakwa zvakanyanya muAustralia kweanopfuura makore makumi mana, uye izvozvi chiratidzo chakapinda mumagazini epasirose ane fashoni uye zvinyorwa zvakapfekedzwa zvakanakisa nemamodeli eAustralia. Nhasi, vazhinji vane mukurumbira uye mamodheru muUS uye muEurope mese vanogona kuonekwa vakapfeka akasiyana Tony Bianco shangu uye zvishongedzo. Kubatsira kumhanyisa kuwedzera kwavo kwepasirese uye kuyambuka muganho kudiwa, Tony Bianco ari kushanda naPitney Bowes kupa
Cloudwords: Global Kushambadzira Kugadzira Kudiwa uye Dhiraivha Kukura
Chishanu, May 20, 2016 China, April 1, 2021 Douglas Karr
Kuti makambani agadzire kudiwa uye kukura pasirese, vanofanirwa kutaura mitauro gumi nembiri kuti vataure ne12% yevateereri vavo. Sezvo inopfuura 80% yemari yemakambani eUS iri kuuya kubva kune vatengi vepasirese, iyo $ 50 + mabhiriyoni zvemukati #localization uye #translation indasitiri inoenderana nekutyaira vatengi kuita mumisika yepasirese. Zvisinei, makambani anoda kukurumidza kushandura zvinhu zvavo zvekushambadzira uye nekuwedzera pasirese vakatarisana nedambudziko hombe: ravo
Mhedzisiro yekuenda kuGlobal neYako Mobile App
Chipiri, Kurume 22, 2016 Chipiri, Kurume 22, 2016 Douglas Karr
Uine mitauro zviuru zvinomwe pasi rose uye kukura pasi rese kune zvishandiso zvemafoni, ungangodaro uchizvitengesa wega kupfupi kana ukaenda kumusika neapp isingatsigire localization… er localization. Sezvineiwo, Ma mobile apps anotsigira Chirungu, Spanish, uye Mandarin Chinese, anogona kusvika hafu yepasi Izvo zvakakosha kuti uzive kuti 7,000% yevashandisi veapp havasi vekuChirungu vatauri! App Annie yakawanikwa apo nhare mbozha yakagadziridzwa kumisika yepasi rose, iyo
Chitatu, Kukadzi 8, 2012 China, June 18, 2015 Douglas Karr
Zvinogara zvakanaka kuona infographic iyo inongoburitsa mamwe mazano ... uye iyi inoita izvo chete. Kune nzira dzakawanda kwazvo dzekuwedzera kutengesa kunze uko asi vashambadziri ndivo vakanamatira nesarudzo yenzira yekutendeuka. Kazhinji tine mukana wekuzviita zvese. Ini ndinogara ndichikurudzira vatengi kutora tekinoroji iri kuwedzera - mune iyi nyaya zvese nhare uye kushambadzira otomatiki ndiwo maitiro
Internationalization, Localization, Encoding, Iceland uye Dudziro yeJapan Cat Mifananidzo Webhusaiti
Monday, May 7, 2007 China, June 18, 2015 Douglas Karr
Kune ruzivo rwakawanda kunze uko kana zvasvika kune yekudyidzana, kwenzvimbo uye encoding mukati mewebhu kunyorera. Kune zvakare kusanzwisisa kwakawanda pamusoro peizvo imwe neimwe inopa yewebhu kunyorera. Heino yangu yekutora… Kana bhurawuza rewebhu rikaita kubatana kune webhu server, inopfuura akati wandei misiyano uye inoita zvimwe zvikumbiro, heino muenzaniso: GET / HTTP / 1.1 Host: www.dknewmedia.com Mushandisi-Mumiriri: Mozilla / 5.0 (Macintosh; U; Intel Mac OS X; en-US; rv: 1.8.1.3) Gecko / 20070309